Unai Emery Oo Ka Hadlay Kalsoonida Uu Ka Qabo Inay Arsenal Xagaagan Ku Guuleysato EL
Unai Emery, waa tababare waayo-aragnimo fog u leh tartanka Europa League kaasi oo uu hantay saddex sano oo xiriir ah markii uu joogay Sevilla. Haatan oo uu ku sugan yahay Arsenal jamaahiirta naadigaan waxay ka dhowrayaa in talaabo lamid ah…
Unai Emery Oo Shaaciyay Sababta Uu Ozil U Seegay Kulankii Ay Dubteen Bournemouth Ee EPL
Unai Emery ayaa wuxuu sheegay in xaalad caafimaad darteeda uu ciyaarahan Mascuud Ozil u seegay kulankii ay 2-1 uga badiyeen dhigooda Bournemouth. Ozil ayaa dhibaato caafimaad oo jir ahaan ah useegay kulankaan, sida laga soo xigtay Emery,…
Unai Emery Oo Ka Hadlay Inuu Wenger Ka Helay Xog Ku Saabsan Arsenal Markii Shaqada Loo Dhiibay
Arsena Wenger ayaa soo afjaray muddo ku siman 22-sano oo uu hayay shaqadda naadiga Arsenal ee wadanka Ingiriiska. Unai Emery ayaa loo magacaabay, kaasi oo la su’aalay hadii uu macalinkaan reer France uu ka xog-wareystay xaaladda kooxda.…
Unai Emery Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababta Uu Horyaalka Premier League Uga Adag Yahay Kuwa Kale
Maamulaha naadiga Arsenal, ninka lagu magacaabo Unai Emery, ayaa shaaciyay in horyaalka Premier League, uu yahay midka ugu adag. EPL-ka waxay haatan ay kaga jirtaa shaxdiisa kala horeynta kooxdiisa kaalinta Shanaad, xili ay leedahay 24…
Unai Emery Oo Ka Sheekeeyay Qaabkii Loogu Qanciyay Inuu Tababare U Noqdo Kooxda Arsenal
Unai Emery ayaa maamule wuxuu unoqday Arsenal horaantii fasal ciyaareedkan, isaga oo laga dhex-soo xushay in ka badan 10 murashax oo loola xiriirinayay. Maamulahaan duhashay dalka Spain ayaa soo gabagabeeyay muddo uu Gunners-ka macalin u…